Bolivia · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Bolivia
Radio fanabezana vondrom-piarahamonina: fomba fampianarana hafa ao anatin'ny hantsana ankihy
Fanabeazana11 Febroary 2022
El Salvador04 Janoary 2022
Fanabeazana14 Septambra 2021
Tantara mikasika ny Bolivia
Fitantanam-pitondrana 19 Avrily 2021
"Mino ny ankamaroan'ny vazimba teratanyo fa nanao sorona ny ainy tamin'ny ady ho an'ny vahoakany i El Mallku - Felipe Quispe ."
Etazonia 20 Febroary 2021
"Ho anay, toy ny fanerena Jiosy iray handalo isanandro manoloana ny sarivongan'i Hitler" ny fandeferana ny fisian'ny karazana tsangambato tahaka ireny.
Ao Bolivia, mihaika ny fetin'ny fahaleovantenan'i Bolivia ny vahoaka tompotany Aymara
Hafanàm-po nomerika 01 Oktobra 2020
"Tsy nidika fanafahana ho anay Aymara ny fahaleovantenan'ireo firenena ireo. Ho anay, fiovàna "tompo" ihany ilay izy, avy amin'ny fihoaram-pahefan'ny espaniola mankany amin'ny fihoaram-pahefan'ny taranany."
Mediam-bahoaka 20 Mey 2020
Ady & Fifandirana 27 Avrily 2020
Bolivia : aty anaty aterineto ilay chola feminista no manohy ny tolony
Foko sy Fiaviana 28 Novambra 2019
Hatrany amin'ny fahazazàny i Yolanda Mamani, feminista chola no efa nanomboka niaro ny zony. Ankehitriny, ireo fandranitana sy vava be fanaony dia re anaty onjampeo, ao amin'ny bilaoginy ary anaty Youtube.
Iza i Eva Copa, ilay zara raha fantatra nefa nanampy nanokatra ny làlan'i Bolivia ho any amin'ny fifidianana vaovao?
Mediam-bahoaka 26 Novambra 2019
Tsy betsaka no mahafantatra an'i Eva Copa, saingy izy no filoha vaovaon'ny antenimieran-doholona boliviàna. Izy no endrika iray fototra nitondra ny firenena hiroso taorian'ireo hetsipanoherana.
Fanoherana 26 Novambra 2019
Aiza no hanombohana azy raha te-hahatakatra ny krizy boliviàna? Soritra vitsivitsy azo zohiana ety anaty aterineto.
Azon'ny Kamerà: Lahatsary momba ny Zon'olombelona ato amin'ny GV
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Jona 2019
Herinandro vitsivitsy miavaka ho an'ny lahatsary GV momba ny zon'olombelona iny, koa ndeha isika hiditra avy hatrany amin'izany...
Blaogy Boliviana – fanendrikendrehana an'i Etazonia sy ny fifandraisana amin'i Shily
Mediam-bahoaka 10 Mey 2019
Tsy any Bolivia ihany no ahitana fanapoahana baomba ataon'ny mpampihorohoro. Izany no nahatonga ireo karazana tombatombana nipoitra raha nisy fipoahana baomba roa tao amin'ny trano fandraisam-bahiny tany an-drenivohitra La Paz. Boliviana roa no maty tamin'izany voina izany ary olona roa ihany koa no voatazona ankehitriny.